वैज्ञानिकहरुले भेट्टाए धर्तीमा जन्मिएका पहिलो व्यक्तिको कंकाल - Sidha News
एजेन्सी। धर्तीमा मानिसको जन्म कहिले भयो ? यस कुरालाई लिएर केहि थ्योरिजहरु छन् । मानिसहरुलाई बाँदर र आदिमानवको अंश मान्ने गरिन्छ । मानिसहरुको अस्तित्वको यो रहस्य सुल्झाउन केन्याको झीलमा पाइएको ८ वर्षका बच्चाको कंकालले धेरै मद्दत पुर्याएको छ ।
त्यस बारेमा जानकारहरुले धर्तीमा मानव हुनुपूर्व आदिमानवका केहि प्रजातीहरु रहेको बताएका छन् । जसमा इरेक्टस, होमो ह्याबिलिस र प्यारेन्थ्रोपस बोइसी सामिल छन् । नयाँ कंकाल मिलेपछि त्इसमा होमो रुडोल्फेन्सिसको पनि नाम जोडिएको छ । मानव जातीको जन्मको रहस्य समेटिएको यो झीलको नाम तुर्काना रहेको छ ।
त्यहाँ १९८४ मा फेला परेको ८ वर्षको बच्चाका कंकालले मानव प्रजातीलाई बिस्तारमा बुझ्न सक्ने सहयोग गरेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार आज भन्दा करिव बीस लाख वर्ष पहिला धर्तीमा पहिलो पटक मानिसको जन्मिएको थियो । त्यसबेला देखि अहिलेसम्म धेरै फरक भईसकेको छ ।
त्यसबाट पहिला मानिसहरु कसरी बस्ने गर्दथे ? के खान्थे ? भन्ने बारेमा पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । वातावरण भएको परिवर्तनले हरियाली रहेको उक्त ठाउँमा बिभिन्न कन्दमूलहरु पाइने गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्।
अहिले उक्त तलाउ ज्वालामुखी गतिविधिहरु हुने इलाकामा पर्ने गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । केन्याका वैज्ञानिक रिचर्ड लिकीले १९६८ मा त्यस तलाउको खाजी गर्न शुरु गरेका थिए ।उनले १९७२ मा मात्र पहिलो सफलता हात पारेका थिए।
त्यसबेला उनले एक होमो रुडोल्फेन्सिस नामक आदि मानवको शिरको कंकाल फेला पारेका थिए । त्यसैले शोध गरिरहेका वैज्ञानिकहरुले मानिस केहि प्रजातीको अंश नभएर बिभिन्न प्रजातीहरुबाट बनेको एउटा स्वरुप भएको बताएका छन् ।
बाँदरको मृ’त्यु भएपछि गाउँनै शोकमा डुब्यो, हिन्दु परम्परा अनुसार अन्त्येष्टी गरियो
यी हुन् प्रत्येक दिन ३० खिल्ली चुरोट खाने ११२ वर्षकी महिला
दुर्गेश थापाको प्रेमिका प्राचीलाई शुभकामना : तिमी आएपछि मेरो जिन्दगीमा बहार आएको छ
कोरोनाले चौ’पट्ट बनाएपछि पो’र्न उद्योगतिर लागिन् यी सुन्दरी, यसरी कमाउँछिन् लाखौं डलर
मेरो कुर्कुच्चालाई प्रेम गर
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भोलि बिवाह बन्धनमा बाँधिदै